Dowladda Somalia oo sheegtay in weli uu socdo Weerarkii Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Somalia oo sheegtay in weli uu socdo Weerarkii Muqdisho
Dowladda Soomaaliya ayaa Saacado kadib faah faahin waxa ay ka bixisay weerar qarax ku bilaawday oo xalay lagu qaaday dhismooyin ku yaalla Magalada muqdisho.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in Al-Shabaab ay weerar qorsheysan kusoo qaadeen goobo Ganacsi oo ay leeyihiin dad Shacab ah balse aysan beegsan Xarumo dowladeed.
axa uu sheegay in laba Gaari oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday Goobo Ganacsi oo ku yalla Wadada Maka-Almukarama,waxana uu nsheegay in dad rayid ah ay khasaaro ku gaarsiiyeen.
Wasiirka sirasmi ah uma soo bandhigin khasaaraha ka dhashay weerarkaas marka laga reebo in uu jiro khasaaro soo gaaray dad Shacab ah,sidoo kale waxa uu sheegay in weli dowladda Soomaaliya weerarkii aysan soo afjarin oo uu socdo.
Deadly air raid hits Al Shabaab in Somalia